गीत अरु कसैको, राग मूल प्रवाहको ! - NepaliEkta
गीत अरु कसैको, राग मूल प्रवाहको !
952 जनाले पढ्नु भयो ।
विन बहादुर रेग्मी
काम र मामको लागि घर गाउँ मातृभूमि छोडेर प्रदेशीनुको पिडा कस्तो हुन्छ ? हामीले कसैलाई सोध्नु पर्दैन । अनेकौं दुःख कष्ट सहेर भोकभोकै काम गरेर दिन काटिरहेका लाखौंलाख प्रवासी नेपालीहरुको पिडा शब्दमा उतार्न त्यति सहज र सम्भव पनि छैन । काम गर्ने ठाउँको शोषण दमन अन्याय अत्याचार थिचोमिचोको कथा झन कहालि लाग्दो छ । मन्दिर पार्टी पौवा, पुल र अनेक बहानामा चन्दा उठाएर लुट मच्चाउनेहरुको बिगबिगी बढेपछि सचेत केहि नेपालीहरुको पहलमा प्रवासी नेपालीहरुको हकहित संरक्षणको लागि सन १९७९ नोभेम्बर ७ मा तत्कालिन अखिल भारत नेपाली एकता समाजको गठन भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो ।
देशमा चलेको निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको दमनको असर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रवासी नेपालीहरुको संगठनमा पर्नु स्वाभाविक थियो । नेपालमा हुने राजनीतिक हलचलको असर धेरै थोरै प्रवासी नेपालीहरुको दैनिकीमा पनि परेको पाईन्छ ।
१२ मई १९८६ झुटा मुद्दा, दमन, गिरफ्तारी १२ महिलाहरु सहित ९६ जनाले लामो समयसम्म मुद्दा खेप्नु परेको ईतिहास बोकेको छ एकता समाजले । बर्षाका च्याऊ सरि देखापरेका लुटेरा समूह एकता समाजको गठन पछि हराएको पाईन्छ ।
नेपालको जनतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको एकता समाजको ईतिहास गर्विलो छ । एकता समाजले कयौं आरोह अवरोह अप्ठ्यारो चुनौतिहरु सामना गरेको छ । एकता समाजलाई हुर्काउन बढाउन विकास र विस्तार गर्न एकताप्रेमी लाखौंलाख संघर्षशिल कार्यकर्ताहरुको त्याग समर्पण र वलिदानी मिसिएको छ । रात–दिन, घाम–पानी, हुरि–झरि, भोक–प्यास निद्रा नभनेर खटेका त्यागि र जुझारु नेता कार्यकर्ताको तपबाट भारतमा र विश्वमै सबैभन्दा ठूलो साझा प्यारो सामाजिक संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको निर्माण भएको छ । सलुट छ ति एकताका हातहरुलाई ।
संगठनलाई मन नपराउने विकास र विस्तार भएको देख्न नसक्ने विरोधी तत्वहरुसँग निर्ममतापूर्वक सम्झौताहिन संघर्ष हुने गरेको छ । त्यहि सम्झौताहिन संघर्षको बलमा हाम्रो सामाजिक संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारतस्थित नेपालीहरुको मुटुको धड्कन बन्दै अभिभावकको भूमिकामा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
समयले फेरि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका नेता कार्यकर्ता समर्थक तथा शुभचिन्तकसँग अग्नि परीक्षा लिंदैछ । नयाँ रुपरंग र ढंगले हाम्रो संगठन मूल प्रवाह माथी अरु कसैको गित गाउनेहरुले र संगठनमा मिाथि हमाला गर्दै समानान्तर कमिटी गठन गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएका अराजक तत्वहरुले गरेको यो भ्रमको खेतीलाई निस्तेज पार्ने जादुई छडि भनेकै सम्झौताहिन संघर्ष हो । आ–आफ्नो ठाउँबाट जनताको बिचमा नाँगेझार पार्ने जिम्मेवारी समयले हामीलाई दिएको छ । हामीलाई विश्वास छ, यो लडाईमा भारतभरिका सम्पूर्ण शोषित पिडीत नेपालीहरुको विजय हुनेछ ।
“नेपालीहरुको बीचमा सामाजिक भावनाको विकास भएमा मात्र एकता समाजको विकास हुनसक्छ” भन्ने एकता समाजको स्थापना कालदेखि आफ्नो मुख्य प्रस्थापनालाई अगाडि बढाउन भारत प्रवासमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुको हातेमा गर्दै अगाडि बढ्नु हुने विश्वास छ । गीत अरु कसैको गाउने तर राग मूल प्रवाहको अलापनेहरुका विरुद्ध सम्पूर्ण भारत प्रवासका नेपालीहरु र मूल प्रवाहका सचेत कार्यकर्ताहरु एकतावद्ध भएर संघर्ष गर्नुपर्ने भएको छ ।
← ‘कथित सामाजिक अभियान्ताले गाउँपालिकाविरुद्ध भ्रम छरे’
अर्धऔपनिवेशिक अवस्था सधैँ यथास्थितिमा रहन्न : केसी →
सर्बहारा वर्गीय चरित्र र शिक्षा
23 April 2020 Nepaliekta 0